आफ्नै समर्थकसँग किन रिसाए नेयमार ? « Drishti News – Nepalese News Portal
आफ्नै समर्थकसँग किन रिसाए नेयमार ?
२६ असार २०७८, शनिबार ४ : १५ मा प्रकाशित
एजेन्सी । कोपा अमेरिका २०२१ को फाइनल अघि ब्राजिलका स्टार फरवार्ड नेयमारले आफ्नै टोलीका समर्थकसँग रिसाएका छन् । नेपाली समय अनुसार अर्जेन्टिना र ब्राजिल खेल्दैछन् ।
ब्राजिलकै केहि समर्थकले अर्जेनिटनाको कप्ता लियोनेल मेस्सीले जितेको हेर्न चाहेको भन्दै सामाजिक संजालमा लेखिरहेका छन् । मेस्सी विश्व फुटबलकै उत्कृष्ट खेलाडी रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि जितुन् भन्ने धेरैको चाहना रहेको छ ।
नेयमार भने ब्राजिलका समर्थकले यस्तो सोच्न नहुने विचार राख्छन् । उनले सामाजिक संजाल इन्स्टाग्राममा लेखेका छन्, ‘म एक ब्राजिलियन हुँ । गौरव र प्रेमले भरिपूर्ण ब्राजिलियन । मेरो सपना सधैं राष्ट्रिय टोलीको साथमा रहेर समर्थकमाझ रहनु हो ।’
उनले भनेका छन्-‘मैले कहिले पनि ब्राजिलको विरुद्धमा बोलेको छैन । चाहे त्यो खेल होस, फेसन सो होस् या ओस्कार नै किन नहोस् । यदि त्यहाँ ब्राजिल छ भने म पनि ब्राजिल हुँ । ब्राजिलियन भएर अन्य सोच राख्न कसले सक्ला ?’
उनले अगाडि थपेका छन्-‘सबैको आ-आफ्नो सोच हुन्छ । म त्यसको सम्मान गर्छु । तर जो हाम्रो विपक्षमा छ मलाई उनीहरुको केहि वास्ता छैन ।’ नेमाइरले ब्राजिलबाट कन्फेडेरेशन कप र ओलम्पिक खेलकुदमा स्वर्ण जितेका छन् । तर, कोपा अमेरिका जित्न सकेका छैनन् ।